Booliiska Ingiriiska oo xanibay socdaalka hooyo Somaliyeed gabadhna xoog uga qaatey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Booliiska magaalada Bristol ee dalkaasi Ingiriiska ayaa socdalka ka joojiyay hooyo Somaliyeed oo u safraysa dalkaasi Jabuuti xoogna uga qaatey gabadh la socotey. Booliiska ayaan sheegin hooyada iyo ilmaha la qaatey.
Hooyada dhashay gabadha xooga lagu qaatey ayay sheegtay in xoriyadii laga qaatey. ”Aaway xoriyadeydii maxaan ugu sheegayaa halka aan tagayo sabab xor ma ihi miyaa ayaa laga xigtey idaacada ku hadasha codka Ingiriiska ee BBC.
Waxa naloola dhaqmey sidii aan dambiileyaal nahay ayaa hooyadu raacisay. Waxana muuqata in Ingiriisku jebiyay sharciga shareecada ah ee u yaala ee dhigaya in qofku dembi lahayn ilaa lagu cadeeyo.
”Waxay u muuqataa caburin iyo in bartilmaameed laga dhigayo hooyooyinka iyo caruurta Somaliyeed ayadoo la adeegsanayo sharciyo iyaga loo samaystey ayuu yiri Maxamed Ciise oo Bristol jooga.
Xaafada Bristol ee reerkani deganaa ayaa iyagu sheegay inay ficilkan qaadeen ayadoo ay jirto shiki ah in gabadhaan loo waday gudniinka fircooniga.
Sidee ku ogaadeen
Ma soo bandhigin wax cadayn, waxase lagu yaqaanaa in ay caruurta ka hadashiiyaan iyagoo ku diraya waalidkood oo inta badan ku hadal af-Ingiriis ayuu yiri Maxamed Ciise, waanan arkey kaysas badan oo noocana.
Caruurtu way ka baqaan cadaanka runa uma sheegeen wayna u sahlan tahay inay waalidkood been ka sheegaan baqdin awgeed taasna loo adeegsado in waalidka looga qaato caruurtooda ayuu raaciyay Maxamed Ciise.
Caruur la badbaadiyo ma jirto ee waxa gacanta loo geliyaa dad ayna isku dhaqan ahayn weliba ayna isku diin ahayn ama kuwo khaniisiina sida ka dhacdey xaafad London ku taal oo Somalidu ka qayliyeen markii ilma yar loo dhiibey khaniisiin ayuu leeyahay Maxamed Ciise.
Go’aanka Ingiriisku qaatey ayaan waxa la qabin wadamada Yurub, waxana hooyadaa u furan inay dacwad reer Yurub la fuusho waayo wax lagu haysto ma jirto aan ka ahayn basaasnimo.
Xaafada Bristol ayaa sheegtay in hay’ada gabadhaas la wareegtay ay la xiriirsan yihiin qoyska laga xoogey. Cidna ma jecla gudniin fircooniga laakiin in qoys sidaan loo bahdilo waxay dhaaftey xadka waxa aan kaliya ku tilmaami karaa xoog sheegasho fariina u diraysa Somalida kale ah waan awoodnaa in aan caruurtiina nidhaa been ka sheega waalidkiin ayuu yiri Nuur Yuusuf